ကချင်ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး ? - Yangon Media Group
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး ?
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီကဦးဆောင်၍ ကချင် ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပထမကြိမ်ထုတ်ကုန်ပြပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် မှ ၂၅ ရက်အထိ မန္တလေးမြို့ ချမ်း မြသာစည်မြို့နယ် (၇၃) လမ်းနှင့် မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်း၌ ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှရရှိတဲ့ အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဒေသထွက်ကုန်တွေကို လာရောက် ပြသထားပါတယ်။ ဒေသထွက်ထုတ် ကုန်ပစ္စည်း ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ ပါဝင်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲတွင် မန္တလေးဒေသနှင့် ကချင်ဒေသထွက် ရိုးရာအစားအစာနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်နှင့် IT နည်းပညာသုံးပစ္စည်းများ ပြခန်းနှင့်ဆိုင်ခန်းများ၊ ဟော ပြောပွဲများ၊ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၊ ချေးငွေရရှိရေးသိကောင်းစရာများ၊ ထုတ်ကုန်ပြပွဲများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းသုံးခု၏ ဒေ သထွက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဖန်တီး မှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆု ငါးသိန်း၊ ဒုတိယဆု သုံးသိန်းနှင့် တတိယဆု နှစ်သိန်းချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ ပေါက်ချောင်းဈေးကို စည်ပင်ဖြည့်စွက် ရန်ပုံငွေ ၄၉ သန်းကျော်ဖြင့် ဈေးရုံအသစ် ??
နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ အတွင်း မော်စကိုမြို့တွင် အပြင်းထန်ဆုံး နှင်းကျဆင်းမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
ပဲခူးရိုးမအတွင်း သစ်ခိုးထုတ်လုပ်မှုများ မပြုလုပ်နိုင်စေရန် တောတွင်းသစ်ထုတ် လမ်းဟောင်းမျာ??
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက် ပြည်တွင်း၌ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးနိုင်ရန် အုန်းသီး၊ ??
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယမန်နှစ်က သတ်မှတ်စည်းကမ်း မလိုက်နာသော ဆေးဆိုင် ၅၁ ဆိုင်ကို အရေးယူ?